Ahenni no Nkyerɛkyerɛ​—Ntetee a Wɔde Ma Ɔhene no Asomfo | Onyankopɔn Ahenni
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Laotian Latvian Lingala Lithuanian Lunda Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nias Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Benkum: Nhyiam a wɔyɛe wɔ abɔnten so wɔ London, England, 1945; nifa: Da koro nhyiam titiriw wɔ Malawi, Afrika, 2012
Ahenni no Nkyerɛkyerɛ​—Ntetee a Wɔde Ma Ɔhene no Asomfo
WODE anigye serew hwɛ ɔkasafo a ogyina asɛnka agua so no anim. Ɔyɛ aberante a ofi w’asafo mu, na eyi ne bere a edi kan a ɔrema ɔkasa wɔ nhyiam ase. Bere a woretie ne kasa no, wo ho dwiriw wo wɔ ntetee a Onyankopɔn nkurɔfo nya no ho. Wokae dwumadi a edi kan a saa aberante no yɛe wɔ mo asafo no asɛnka agua so no​—na seesei hwɛ nkɔso ara a wanya! Akwampaefo Ɔsom Sukuu a ɔkɔe no ama wanya nkɔso paa. Ɛnkyɛe koraa na ɔne ne yere kɔɔ Ahenni Asɛmpakafo Sukuu no bi. Bere a ɔmaa ɔkasa no kama wiei a worebɔ wo nsam no, wototo w’ani dwinnwen ntetee a Onyankopɔn nkurɔfo nyinaa nya no ho.
Bible hyɛɛ bere a Onyankopɔn nkurɔfo nyinaa bɛyɛ nnipa a ‘Yehowa akyerɛkyerɛ wɔn’ ho nkɔm. ( Yes. 54:​13) Saa bere no ara mu na yɛte yi. Wɔnam yɛn nhoma ahorow, asafo nhyiam, amansin nhyiam, amantam nhyiam, ne sukuu ahorow a wɔahyɛ da ayɛ ho nhyehyɛe sɛ ensiesie yɛn mma wɔmfa yɛn nni dwuma ahorow bi wɔ Yehowa ahyehyɛde no mu so na wɔkyerɛkyerɛ yɛn. Wɔ saa ɔfã yi mu no, yebesusuw sɛnea saa ntetee ahorow yi nyinaa ma yenya adanse a edi mũ sɛ Onyankopɔn Ahenni no redi tumi nnɛ no ho.
Yɛbɛyɛ dɛn atumi anya nhyiam a yɛde som Yehowa no so mfaso kɛse?
Ntetee a Wɔde Ma Ahenni no Asomfo
Ɔkwan bɛn so na teokrase sukuu ahorow aboa Ahenni no ho asomfo ma wɔatumi ayɛ adwuma a wɔde ahyɛ wɔn nsa no?